FITAOVANA FILAMENANA PLASTIKA
Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2002
Masinina extruding filamentan'ny kifafa
Masinina extruding filamenta borosy plastika
Masinina extruding filamentan'ny tady plastika
Masinina mamoaka filamentan'ny volo vita amin'ny plastika
Masinina mamoaka fantsom-boasary synthetic plastika
Masinina extruding filament borosy kosmetika
Masinina extruding filamenta borosy nify
Masinina extruding filamentana borosy plastika
Masinina extruding filament azo antoka harato plastika
Masinina extruding filament manjono plastika
Masinina extruding filamenty nylon plastika
Masinina extruding tariby PET
Sarin'ny mpanjifa sy fampiratiana
"Rindrin'ny sarin'ny mpanjifa" an'ny orinasan'ny milina Qingdao Zhuoya
Ho an'ireo mpanjifa rehetra izay nitsidika ny mpanjifanay dia ho hitanao fa misy rindrina mampiseho sary marobe an'ny mpanjifanay izay manana fiaraha-miasa mahomby miaraka aminay. Mifantoka amin'ny tsipika famokarana milina monofilament plastika isika mandritra ny 20 taona. Amin'ny alàlan'ny fampivoarana mitohy, afaka ...
Fandefasana vaovao ny tsipika filom-bolo borosy PET ho an'ny mpanjifa tsena aziatika
Tamin'ny 17 Jolay, nandamina kaontenera nampidina entana ho an'ny mpanjifanay izahay. Ity dia tsipika famokarana filamentan'ny kifafafa PET & PP feno. Na dia noho ny toe-javatra Covid 2019 aza dia tsy afaka mitsidika anay ny mpanjifanay, matoky ny kalitaon'ny milina sy ny serivisy ana orinasa izahay. Nijery ny tsipika milina ny kliobanay ...
Avelao hiasa hiady amin'ny valanaretina izao tontolo izao
Ny valanaretina pnemonia satroboninahitra tampoka dia namely an'izao tontolo izao ary nandrahona ny filaminan'ny fahasalamam-bahoaka manerantany. Ny areti-mifindra lehibe dia fahavalon'ny olombelona rehetra. Eo ambanin'ny toe-javatra pesta dia tsy misy firenena afaka miatrika an'io fahavalo iraisana io irery, ary tsy misy firenena afaka hikarakara ny tenany sy ...
Ahoana ny fitazonana ilay milina fivoahan'ny filament plastika rehefa lany ny visy?
1. Ny plastika tsirairay dia misy elanelam-panodinana mari-pana plastika mety tsara, ary ny mari-pana fanodinana ny barika masinina mamoaka fantsom-panafody dia tokony hofehezina mba hanakaikezana an'io maripana io. Rehefa miditra ao anaty barika avy amin'ny hopper ny plastika granular dia hahatratra ny fihinana voalohany ...
Fitsapana ny tsipika milina fibre volo synthetic an'ny volo olombelona
Amin'ny June.04th 2021, dia manandrana ny tsipika milina vita amin'ny volo vita amin'ny taovolo PET tanteraka izahay. Ity tsipika milina vita amin'ny volo synthetic PET ity dia namboarina hihaona amin'ny fahafaha-mamokatra indroa miaraka amin'ny vidiny ambany. Avy amin'ny akora mifangaro mandra-pahatapitry ny vita vita amin'ny fibre volo tahaka ny PET, ny mpanjifanay dia afa-po amin'ny ...
Fandefasana tsipika milina boribory boribory PET
Amin'ny May.22, 2021, dia mandamina fanaterana tsipika milina monofilament boribory PET iray vaovao ho an'ny mpanjifa. Nanjary nalaza kokoa noho ny tombony ananany. Flakes tavoahangy PET miisa 100% namboarina, tsipika fandidiana mora, vidin'ny famokarana ambany sns dia raisin'ireo mpanjifa avy amin'ny isa maro ...
Famakafakana ny fampandrosoana tsena ny milina fanaovana sary monofilament plastika
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny siansa sy ny teknolojia, ny ambaratonga mandeha ho azy ny milina fanoratana filamenta plastika dia nihatsara tsikelikely. Manomboka amin'ireo mpiasa telo teo aloha ka hatramin'izao fandidiana izao dia mpiasa iray ihany no mila miasa. Izy io dia afaka mihazakazaka tsy misy mpanabe manana fahaizana sy fahalalana azo ampiharina ...
Fitsapana ny tsipika milina filama kiritika PET ho an'ny mpanjifa Sri Lanka
Tamin'ny April.26,2021, nahavita fitsapana ny tsipika milina filamentan'ny borosy PET iray ho an'ny mpanjifanay Sri Lanka izahay. Ity tsipika milina ity dia naharitra 50 andro taorian'ny fanamafisana ny baiko mba hitsapana araka ny fifanarahana nifanaovanay. Manomboka amin'ny fanamainana akora mankany amin'ny fantsom-panafody, fanamafisana ny lafaoro, fanapahana filamentana ary ...
Harato fiarovana plastika
Ny harato azo antoka dia harato fiarovana miorina eo ambaniny na eo anilany eo am-pametrahana ireo fitaovana fananganana avo lenta na fampisehoana zavakanto hisorohana ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny olona na ny zavatra latsaka. Ny harato azo antoka dia misy vatan'ny harato, tady sisiny, tetera ary tendon-tsorona. Ny vatan'ny harato dia knitte ...
Fitsapana tsipika milina PET plastika
Ny tady PET plastika dia novokarin'ireo flakes tavoahangy PET 100% namboarina, noho izany ny vidin'ny famokarana dia tena mora tokoa. Ny tady PET dia arahabaina amin'ny tsena ary mety ho toy ny tady plastika maro karazana toy ny PP, PE, PA sns. Tamin'ny Mar.27th, 2021, ny orinasanay dia nanandrana tsipika famokarana tady PET feno vaovao ho an'ny ...
Fandefasana filamenta / fibre kosmetika PBT amin'ny 10 martsa 2021
Tamin'ny 10 martsa 2021 dia nandamina fandefasana tsipika famokarana fibre kosmetika PBT ho an'ny mpanjifanay indianina izahay. Kaontenera telo no ilaina amin'ny tsipika famokarana feno. Plastika PBT PET famafazana borosy filament extruding milina tsipika dia hamokatra monofilament avo lenta izay hampiasaina t ...
Toe-javatra eo amin'ny tsenan'ny plastika voaverina
Amin'ny faran'ny fialantsasatry ny Fetin'ny Lohataona dia misy vaovao tsara matetika eo amin'ny sehatry ny fanodinana. Ny indostria dia manohy ny asa sy ny famokarana, ary miabo amin'ny fijerin'ny tsena. Antenaina fa ny tsenan'ny PE voaverina dia hiakatra manodidina ny 100-200 yuan / taonina amin'ny fotoana manaraka. Manantena izahay fa hitranga ...
Qingdao Zhuoya Machinery Co., Ltd. no orinasa mpiorina amin'ny fahalalana sy ny haitao miaraka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famoronana, varotra ary serivisy
Làlana West Pingcheng, Zone Industrial Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China.